Shirkada ganacsiga Towfiiq oo raashin iyo caano ah ugu deeqday dadkii waxyeeloobay (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 26, 2013 5:05 b 0
Boosaaso, November 26, 2013 – Shirkada ganacsiga Towfiiq ayaa maanta raashin fara badan oo isugu jira Bur iyo Caano, waxay ugu deeqday dadkii masiibadu ku haleeshay deegaano ka tirsan Puntland.
Towfiiq ayaa raashinka oo ka kooban ilaa 800 oo kiish oo u badan Bur isla markaasna ay ku jiraan Caano, waxaa uu ku wareejiyey hay?ada horumarinta bulshada ee Tadaamun qaybteeda gobolka Bari.
Maxamed Daahir Qoobey oo ah maamule ku xigeenka shirkada oo la hadlay warbaahinta, waxaa uu sheegay in raashinka ay u qoondeeyeen in lagu caawiyo dadkii masiibada duufaanta ah ku dhacday dhowaan.
Towfiiq ayaa munaasabada maanta ka shaacisay in ay horay u bixisay ilaa 200 oo kiish oo raashin ah, taas oo ay ku wareejisay culimada arruurinaysa gurmadka loo fidinayey dadka reer Puntland ee markii ay masiibadu dhacday.
Mudane Qoobey, waxaa uu ugu baaqay dowladda Puntland iyo hay?adaha caalamiga ah in ay dib-u-dejin u sameeyaan dadka isla markaasna xoolo loo iibiyo dadkii reer guuraaga ahaa ee maalkoodii ku waayey duufaanta.
Guud ahaan Puntland waxaa ka socda gurmadyo kala duwan oo ay fidinayaan arrurada bulshada, ganacsatada, culimada, hay?adaha maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah iyo dowladda intaba, qorshayaal kala duwan oo dadka loogu talo-galay ayaa weli socda.
Dhegeyso: Aamina Ladan Axmed Cali oo daljir ka tirsan ayaa war-bixin ka diyaarisay?